Ezona ncwadi zibalaseleyo-UkuKhangela kwaBenzi beNcwadi abaPhambili kwi-Intanethi
Iindawo zokubheja kwi-Intanethi – Find the Best Bookmakers for 2022
Wamkelekile kwiiNcwadi eziBalaseleyo, indawo yokumisa kuye nawuphina umntu okhangela iibhukumeyikha ezihamba phambili kwi-Intanethi. Sinikezela ngokunyaniseka, uphononongo olungenamkhethe noluneenkcukacha ngeendawo ezininzi zokubhukisha kwi-Intanethi, ukukunceda ufumane eyona ilungele iimfuno zakho. Iqela lethu linamava amaninzi okubheja kwezemidlalo, njengababini babhejethi kwaye njengeengcali zeshishini, kwaye sitsalela kuyo yonke ukuze ikunikeze olona lwazi lubalaseleyo.
Ungakhathazeki ukuba umtsha ngokupheleleyo kwihlabathi leencwadi ezikwi-intanethi, Siza kukufundisa konke okufuneka ukwazi. Kwindawo yethu, uyakufumana inkcazo yokuba yintoni kanye kanye ebangela ukuba umbhuki abe yenye yezona zilungileyo ukuze ungachithi naliphi na ixesha kwiindawo ezingekho mgangathweni. I-intanethi likhaya elininzi lababhuki, kodwa kwiiNcwadi eziBalaseleyo, Senze wonke umsebenzi onzima wokuhlela okulungileyo kokubi, ukonga ixesha kunye nomzamo, kwaye ndikuncede ukuba uqalise ukubeka ukubheja ngaphandle kwexesha.
Iindawo eziBalaseleyo zokuBheja zika-2021
Indlela esibajonga ngayo abaBhuki be-Intanethi ukukuZisela ezona ncwadana zibalaseleyo
Ngaphambi kokucebisa ukuba ube ngumbhuki, siyibeka kwinkqubo yohlolo eneenkcukacha. Ngale ndlela siyakwazi ukuzisa kuphela ezona zilungileyo kuzo kwaye sikhuphe ezo zingaphantsi. Kukho amanqanaba aliqela oku kwaye yenzelwe ukuvavanya yonke imiba yencwadi ekwi-intanethi, ukusuka kwinkqubo yokubhalisa kuluhlu lwamathuba okubheja, iibhonasi, kunye nokuninzi.
Xa ubeka ukubheja kwiindawo zokubhukisha kwi-Intanethi, kubalulekile ukuba uyazi ukuba ungayithemba indawo. Baninzi abaphetheyo kwezokungcakaza abalawula iibhukumeyikha ezikwi-intanethi, njengeKhomishini yoNgcakazo yase-United Kingdom, IGunya leMidlalo yeMalta kunye noRhulumente waseCuracao. Siya kucebisa kuphela ibhukumeyikha ukuba inelayisensi evela kwigunya elaziwayo. Ngale ndlela kuphela unokuqiniseka ukuba imali kunye nemfihlo yakho iya kukhuselwa kwaye iwebhusayithi ayisiyonyani.
Iimakethi zezeMidlalo kunye nokuBheja
Nje ukuba siqiniseke ukuba i-bookie ilungile, Siza kuqala ukujonga uluhlu lwezemidlalo olugubungelayo kunye neemarike ezikhoyo; emveni kwakho konke, akukho sizathu sokucebisa ibhukumeyikha enganikeli ngamathuba amaninzi okubheja. Ngelixa phantse bonke ababhuki abakwi-Intanethi beza kugubungela ezemidlalo, njengebhola ekhatywayo, ibhola yomnyazi, ihoki, kwaye nangokunjalo, uninzi lweebhukumeyikha zidlulela ngaphaya koku kwaye zinikezela ngeemarike zokubheja kwimidlalo engaziwayo, ezifana badminton, ibhola yesandla, snooker, nezinye ezininzi.
Ayisiyiyo nje uluhlu lwemidlalo ebalulekileyo, kodwa kunye noluhlu lweemarike. Bonke ababhuki baya kubonelela ngeemarike ezisisiseko, njengemali yemali, Iitotali kunye nokusasaza ukubheja. Nangona kunjalo, Sikhangela iibhukumeyikha ezinikezela kakhulu kunale, ukunika abathengi amandla okubheja nakweyiphi na imeko yomnyhadala wezemidlalo abafuna ukuyenza. Sithanda nokubona ukhetho olufanelekileyo kwizicelo zokubheja, ngqo kwiimarike, Iimarike zemidlalo kunye neemarike zokudlala, Ukuqinisekisa ukuba unokubheja okuninzi njengoko ufuna.
Ukubheja iiBhonasi kunye nokunyuselwa
Zonke iibhuki ezilungileyo ziya kubonelela ngenani leebhonasi kunye nokunyuselwa kubathengi babo; nangona kunjalo, ayizizo zonke iibhonasi ezenziwe ngokulinganayo. Sijonga zonke iibhonasi ezikhoyo ngokweenkcukacha ezinkulu, ukuqala bookies sayina unikeza. Akunakuphepheka ukuba zonke iibhonasi ziza nemigaqo nemiqathango, yiyo loo nto sibajonga ngocoselelo ukuqinisekisa ukuba balungile. Akukho sizathu sokubanga ibhonasi kuphela emva koko ufumanise ukuba ngekhe uhlangabezane neemfuno zokubheja ukuze ungaze uphinde ukwazi ukurhola.
Oku kuyinyaniso kuzo zonke iibhonasi, ayisiyiyo kuphela incwadi yokubhalisela ukubhukisha. Kunokubakho ukubonelela ngokubheja okufumanekayo, Ukubuyiselwa kwemali ezinkozo, Izikimu zokunyaniseka, kwaye nangokunjalo. Xa ujonga ibhukumeyikha, Sijonge kuzo zonke iinkcukacha ukuqinisekisa ukuba zimele ixabiso elifanelekileyo lemali kwaye zibonelela ngezibonelelo eziyinyani.
Ukubheja ngeFowuni kunye namava abaThengi
Kulula ukungahoyi indlela ekubaluleke ngayo ukuyilwa kwewebhusayithi xa uzama ukufumana ababhuki ababalaseleyo. Ukuba incwadi yokubhukisha ibonelela ngamawaka eemarike kumakhulu ezemidlalo, ke kubalulekile ukuba indawo yenzelwe kakuhle kwaye kulula ukuyisebenzisa. Oku kusebenza kuzo zonke iinkalo zokusebenzisa ibhukumeyikha, ukusukela kumzuzu wokujoyina. Kungenxa yoko le nto qala ngokujonga kwakhona inkqubo yobhaliso; Siyaqinisekisa ukuba ithe tye kwaye umqokeleli wencwadi ubuza kuphela isixa esifanelekileyo solwazi.
Namhlanje, uninzi lwabathengi bezemidlalo baya kufuna ukubheja kwezixhobo zabo eziphathwayo ngokulula. Iluncedo kakhulu kwiimeko ezahlukeneyo, ngakumbi xa ubukele umdlalo bukhoma. Sijonga ngononophelo kwii-bookies zokusebenza kunye neewebhusayithi ezihambayo. Ngaphandle kokujonga ukuba ukubheja ngeselula kunokwenzeka, Sifuna ukubona ukuba iiapps / iiwebhusayithi ziyilelwe kakuhle, Nika uluhlu olupheleleyo lokusebenza, kwaye uvumele abadlali ukuba babhejele ekuhambeni ngokulula.
Iidiphozithi kunye notsalo – Iintlawulo kunye noKhuseleko
Akukho ndlela unokubeka ukubheja ngaphandle kokufaka imali kwiakhawunti yakho yokubhukisha kwi-Intanethi. Nangona kunjalo, Iyaqondakala le nto eyenza ukuba abantu abaninzi boyike. Kungenxa yoko le nto sijonga ngononophelo kuzo zonke iindlela zokuhlawula ekubonelelwa ngazo. Asikokujonga kuphela ukuba bonke bayahlonitshwa, ikhuselekile, kwaye ndikhuselekile, kodwa sifuna ukubona ukuba kukho uluhlu lokubonelela iimfuno zomntu wonke. Ezona ndawo zibalaseleyo zokubhuka ziya kunika ngaphezulu lee kunentlawulo yekhadi letyala kunye nekhadi; Kuya kufuneka uphinde usebenzise uluhlu lwee-wallets, amakhadi ahlawulelwa kwangaphambili, iinkqubo zentlawulo mobile, Ukutshintshwa kwebhanki ngokukhawuleza, Utshintshiselwano ngocingo, nkqu nemali yedatha yedijithali.
Ngaphandle kweendlela zokuhlawula, Sikwajonga namaxesha entengiselwano. Iidiphozithi kufuneka zibe kwangoko, ubuncinci uninzi lweendlela zokuhlawula, Ngelixa izicelo zokurhoxa kufuneka zenziwe ngokukhawuleza ukuze ungashiywa ulinde i-winnings yakho. Ukwengeza, Siza kujonga umgaqo-nkqubo wokurhoxa ukuze ubone ukuba ngaba kukho naziphi na izithintelo ezikhoyo, njengentloko yenyanga, kwaye ukuba kunjalo ingaba zilungile kwaye ziyahambelana nemigangatho yoshishino.
Naxa ubheja ngeyona bookie ibalaseleyo kwi-Intanethi, Unokufumana iingxaki amaxesha ngamaxesha okanye unombuzo ofuna ukuphendulwa. Kungenxa yoko le nto sijonga ngononophelo kwinkxaso yabathengi enikezelwa ngababhuki. Ukongeza kokujonga kumacandelo oncedo, ukuqinisekisa ukuba zinenkcukacha kwaye ulwazi lucaciswa ngendlela ecacileyo, Siza kujonga iindlela ekunokuqhagamshelwana ngazo nenkxaso yabathengi kunye neeyure zabo zokusebenza. Sifuna ukuqinisekisa ukuba iqela lenkxaso yabathengi liyakhawuleza ukuphendula, inembeko, kwaye inika iingcebiso ezicacileyo neziluncedo.
Emva kokujonga zonke ezi zinto zingasentla, siya kuthi emva koko sinike ibhukumeyikha ireyithingi iyonke kunye neengcebiso. Oku akuthethi ukuba sidwelisa zonke ii-bookies esizifundileyo, njengoko asizukucebisa nayiphi na engonelanga ngokwaneleyo. Nangona kunjalo, emva kokuvavanya konke oku kungentla ukuba sicinga ukuba kufanelekile ukwamkelwa njengenye yeencwadi eziphambili zokubhuka, emva koko siya kubhala uphononongo olupheleleyo ukuze ufunde. Thatha ixesha lokufunda ezimbalwa kuhlolo lwethu kwaye siqinisekile ukuba uyakufumana incwadi oyithandayo ye-intanethi.
Isikhokelo seeBhonasi eziBalaseleyo zeNcwadi
Njengoko kukhankanyiwe, Zonke iincwadi zokubhuka ezikwi-Intanethi ziya kubonelela abathengi ngeebhonasi. Kukho iibhonasi ezamkelekileyo zokunceda ukutsala abathengi abatsha kunye neebhonasi ezininzi kunye nokunyuselwa okusebenza njengenkuthazo yokubuyela. Nangona kunjalo, Siyazi ukuba umhlaba weebhonasi zebhukumeyikha unokudideka ekuqaleni, ngakumbi ngokubhekisele kwiimeko zokubheja, nasi isikhokelo esifutshane kuyo yonke into ekufuneka uyazi.
Wamkelekile iiBhonasi zeDiphozithi
Eyona bhonasi ixhaphakileyo oza kuyifumana yibhonasi yokubhalisa. I-bookie iya kunika ukutshatisa idipozithi yakho yokuqala ukuya kwisixa esithile, Ukuqinisekisa ukuba unemali eninzi kwiakhawunti yakho. Umzekelo, unokubona into efana ne-100% ukuya kuthi ga kwi-100 leedola, Oko kuthetha ukuba baya kuhambelana nediphozithi yakho ukuya kuthi ga kwi-100, oko kukuthi. idiphozithi $ 100 kwaye ube $ 200 kwi-akhawunti yakho. Ngamanye amaxesha ezi bhonasi zikhulu ngakumbi, I-150% okanye i-200%.
Ukuba i-bookie ekwi-Intanethi ayinikezeli ngebhonasi yokuqala yedipozithi njengombonelelo wayo wokubhalisa, iya kuthi ikunike uhlobo oluthile lokubheja simahla okanye ukubheja okufanayo. Njengokuba, ukuba wenza ukubheja kwe- $ 5, ke baya kukunika enye $ 5 ukubheja simahla. Ngamanye amaxesha isithembiso sinokuba nesisa ngakumbi kwaye sikunike ukubheja kabini okanye kathathu, okanye nokubheja okuninzi.
Ukubuyisa imali kunye nomngcipheko Ukubheja mahala
Ngelishwa, ayizizo zonke ukubheja obeka kuzo ukuphumelela. Ukunceda nokubuyisa le nto, uninzi lwee-bookies ezikwi-Intanethi ziya kukunika imali ekubuyiseni imali ekubheja kwakho okokuqala okanye ukubheja endaweni yoko ukuba iyalahleka. Njengokuba, ukuba ulahlekelwe yimali eyi- $ 10 kwiqela eliphumeleleyo, ke uya kuba nethuba ukubeka enye $ 10 ukubheja uhlobo olufanayo.
Uninzi lweencwadi ezigcinwe kwi-Intanethi zibonelela ngeendlela ezithile zokunyusa ukungahambelani. Oku kunokuba lula njengoko benikezela ngokungangqinelaniyo kumdlalo othile okanye umsitho, okanye isenokuba nzima ngakumbi kwaye ibandakanye amathuba okonyusa ukubheja kwe-accumulator (xa udibanisa ukubheja okuninzi). Rhoqo, ezi ziyafumaneka veki nganye, ngakumbi kwimidlalo ephambili yezemidlalo.
Kucacisiwe imiqathango kunye neemeko zebhonasi
Yonke ibhonasi oyinikwayo iya kuza kunye neemeko eziqhotyoshelweyo. Kubalulekile ukuba uziqonde ezi zinto ngokungathi azidibananga, Umbhuki-mali unelungelo lokuhlutha ibhonasi kunye nayiphi na imali ephumeleleyo.
Imfuno yokubheja kukuba ufuna kangakanani ukubheja ngaphambi kokuba urhoxe. Ihlala ichazwa njengesixa semali yebhonasi, umzekelo 5x. Oku kuthetha ukuba ukuba ubunokwamkela ibhonasi eyi- $ 50 eneemfuno zokubheja ezi-5x, ke kuya kufuneka ubheje i- $ 250 ukuhlangabezana neemfuno.
Oku kunokuvakala ngathi ubheje izixa ezikhulu ukuze uhlangabezane neemfuno zokubheja. Nangona kunjalo, kumaxesha amaninzi uya kuba nakho ukusebenzisa nakuphi na okuphumelela okuvela kwibhonasi ukuze uhlangabezane neemfuno. Ke ngoko, ukuba ubeka ukubheja okuphumeleleyo, unokusebenzisa nje okuphumelela kubo ukubeka ukubheja okungaphezulu kwaye usebenzele ukuhlangabezana neemfuno.
Uya kubona ezinye izithintelo. Njengokuba, rhoqo kuyakubakho imigqaliselo malunga namathuba okubheja okufanelekileyo. Umzekelo, imiqathango ingachaza ukuba iingxaki kufuneka zibe yi-1.40 okanye ngaphezulu. Ngamanye amazwi, ukuba ubeka ukubheja ngokungahambi kakuhle kunoko, emva koko ukubheja akunakubala kwiimfuno zokubheja. Ngapha koko, inokuthintelwa kwiintlobo ezithile zokubheja. Umzekelo, Kuya kufuneka usebenzise ukubheja kwe-accumulator ngenani elincinci lemicimbi kunye nobuncinci bezinto ezingathandekiyo.
Kukho ezinye izinto ezimbalwa ekufuneka uzazi. Qho, Kuya kufuneka uhlangabezane neemfuno zokubheja ngaphakathi kwexesha elibekiweyo. Kuya kufuneka ukuba ubenolwazi malunga nokusetyenziswa gwenxa kwebhonasi, umzekelo, Ukwenza iiakhawunti ezininzi ukubanga iibhonasi ezininzi. Nangona kunjalo, konke oku kuya kuchazwa ngokucacileyo kwimimiselo neemeko zebhonasi, ke qiniseka ukuthatha ixesha lokuzifunda ngaphambi kokuba wamkele ibhonasi.
Isango lakho kwiiNcwadi eziBalaseleyo kwi-Intanethi
Sisebenze nzima ukudibanisa zonke izixhobo onokuzidinga ukuze ufumane ezona zibhuki zibalaseleyo. Indawo yethu igcwele ngokupheleleyo ulwazi kwaye siyayihlaziya rhoqo. Ukuba ufuna indawo entsha yokubheja, emva koko uthathe ixesha lokuphonononga kwaye siqinisekile ukuba kungekudala uza kuxhasa abadlali kunye namaqela owathandayo kubhukumeyikha emnandi kwi-Intanethi.